आफ्नो क्षमतालाई चिन्नुहोस् ! | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ चैत्र २९, आईतवार १३:१६ गते
हामीले जीवित रहुन्जेलसम्म निराश हुनु आवश्यक छैन । मानिसको वास्तविक क्षमता नै आफूले आफैँलाई चिन्ने, आफ्नो हृदयलाई शान्तिले भरिपूर्ण तुल्याउने हो ।
यदि तपाईं आफ्नो जीवनमा कुनै पनि कारणले असफल हुनुभएको छ भने त्यो असफलतालाई कहिल्यै पनि स्वीकार नगर्नुहोस् । तपाईं बाल्यकालमा तातेताते गर्नका लागि कोसिस गरिरहँदा कैयौँ पटक हिँड्ने प्रयास गर्दै उठ्नुहुन्थ्यो अनि लडिहाल्नुहुन्थ्यो । तर, तपाईंले हिँड्न नसिकुन्जेलसम्म त्यो असफलतालाई पटक्कै स्वीकार गर्नुभएन । फलतः तपाईंले हिँड्न सिक्नुभयो । आफूमाथि विश्वास राखेर आफ्नै क्षमताको सहाराले अघि बढ्ने मानिसलाई अवश्य पनि सफलता प्राप्त हुन्छ ।
हामीभित्र श्वास आइरहेको कारणले नै यो सामथ्र्य पनि छ । अर्थात्, हामी जीवित छौँ । यो कुरालाई सामान्य नठान्नुहोस् । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त के हो भने वास्तवमा जीवित हुनाले नै मानिसमा क्षमता छ । तपाईंलाई यो वास्तविकता बोध भएपछि तपाईं कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ र तपाईंको साँचो क्षमता के हो भन्ने कुरा थाहा हुनेछ । तपाईंलाई सृष्टिकर्ताले उपहारका रूपमा त्यो क्षमता दिएका छन् ।
एकपटक एकजना राजाले आफ्ना मालीलाई बोलाएर भनेछन्, “पहाड माथिको मेरो महलमा एउटा एकदमै सुन्दर बगैँचाको निर्माण गरिदेऊ ।”
राजाको आदेशलाई मानेर माली बगैँचाको निर्माणतर्फ जुटे । पहाडको फेदमा एउटा नदी थियो । ती माली दुईवटा ठूला–ठूला गाग्रालाई काँधमा अघिपछि पारेर बोक्दै हरेक दिन तल नदीमा पानी भर्न जान्थे । अनि, बल्लतल्ल महलसम्म पुगेर आफूले तयार पारेको बगैँचामा पानी लगाउने गर्थे ।
निकै समय यही क्रमअनुसार बित्दै गयो । एक दिन दुईवटा गाग्रामध्ये पछाडितिरको गाग्रो कुनै चीजसँग ठोक्किएर त्यसमा प्वाल पर्न पुग्यो । सधैँ ती माली पहाडबाट तल झर्थे । दुवै गाग्रामा पानी भर्दथे । तर, उनी महलसम्म आइपुग्दा अगाडिको गाग्रोमा त पानी भरी नै हुन्थ्यो तर पछाडिको गाग्रो भने चुहिएर रित्तो भइसक्थ्यो ।
एकदिन अगाडिको गाग्रोले पछाडिको गाग्रोलाई भन्यो, “तिमी त अब कुनै कामका लागि लायक नै छैनौ । तिमी त प्वाल परिसक्यौ । मेरो कारणले राजाको बगैँचा यति धेरै हराभरा भएको छ, किनभने मैले मात्रै पानीलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउँछु । तिमीमा त यहाँसम्म आइपुग्दाओर्दा एक थोपा पनि पानी बाँकी रहँदैन । अब तिमी बेकम्मा भइसक्यौ ।”
पछाडिको गाग्रोले आपूm कुनै कामको लायक नरहेको भन्ने लाञ्छना सुनेपछि उसलाई अत्यन्तै दुःख लाग्यो । अर्काे दिन माली आए । दुवै गाग्रातिर नजर लगाए । उनलाई पछाडितिरको गाग्रो निकै उदास भएको महसुस भयो । त्यसपछि मालीले सोधे– “तिमीलाई के भयो, किन उदास छौ ?”
अनि, त्यो गाग्रोले भन्यो, “अगाडिको गाग्रोले त म अब कुनै कामको लायक नै छैन रे भन्छ ! तपाईं बिहान–बिहानै पानी भर्नुभएर बगैँचामा आइपुग्नुहुँदा अगाडिको गाग्रोमा त पानी भरी नै हुन्छ तर ममा त प्वाल परेको छ । एक थोपा पनि पानी बाँकी रहँदैन । अगाडिको गाग्रोको भनाइ के छ भने उनकै कारणले नै यो बगैँचा हराभरा भएको छ । मेरो कारणले त केही हुन सक्दैन ।”
मालीले हाँस्दै भने, “तिमी यो रहस्य बुझ्दैनौ । तिमीमा प्वाल भएको थाहा हुँदाहँदै पनि मैले तिमीलाई फ्याँकिन । मैले तिमीलाई सधैँ तल लगेर तिमीमा पनि पानी भर्छु र माथिसम्म ल्याउँछु । अँ, यो कुरा त ठिकै हो जति पनि बगैँचा हराभरा भएको छ, बगैँचाको हरियाली छ, त्यो त अगाडिको गाग्रोको कारणले नै भएको छ । तर, के तिमीले देखेका छैनौ ? त्यो नदीबाट माथि बगैँचासम्मका जाने बाटोको किनारमा जति पनि थरीथरीका फूलहरु फुलिरहेका छन्, ती तिम्रै कारणले त फुलेका हुन् । तिनीहरु सबैले तिम्रो कारणले नै पानी पाउँछन् ।
अर्कोको कारणले त केवल एउटा मात्रै बगैँचा हराभरा भएको छ तर तिम्रो कारणले त बाटाभरि– त्यो नदीदेखि लिएर बगैँचासम्मको क्षेत्र आज हराभरा छ । किनभने, तिनीहरुले तिम्रै कारणले पानी पाएका छन् ।”
यो कुरा सुनेपछि त्यो गाग्रो असाध्यै खसी भयो । ऊ अभैm पनि काम लाग्ने चीज भएको कुरा उसलाई थाहा भयो ! हो, उसले राजाको बगैँचामा त सिँचाइ गर्न सकेन तर उसले त्यस बाटोमा यस्तो सुन्दर बगैँचा बनायो– जुन बाटोबाट सारा मानिस ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन् । ती सबैले पूmलको सुगन्ध लिन पाउँछन् ।
यसर्थ, चाहे जस्तोसुकै परिस्थिति होओस् तर कहिल्यै पनि आफूलाई कमजोर ठान्न आवश्यक छैन । जीवनमा हरेकको आफ्नै महŒव हुन्छ । यो कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त हामी जीवित रहुन्जेलसम्म जीवित भएका कारणले नै हामीमा अनन्त सम्भावनाहरु हुन्छन् । जीवनमा चाहे जतिसुकै कठिनाइहरु आऊन् तर आफ्नो दक्षतालाई चिनेर अघि बढ्ने मानिसलाई जीवनको हरेक क्षेत्रमा अवश्य पनि सफलता हात लाग्दछ । यस्ता मानिसहरु कठिन समयमा पनि निराश हुँदैनन् ।
मलाई थाहा छ, अहिले मानिसहरु भन्छन्, “ओहो, मानिसहरु त खराब हुन्छन् । हेर्नुहोस् त तिनीहरुले के गरिरहेका छन् ! तिनीहरु त एक अर्कालाई मारिरहेका छन्, एक अर्कालाई आतङ्कित तुल्याइरहेका छन्, एक अर्कालाई त्रसित पारिरहेका छन् । त्यो त मानिसको स्वभाव होइन ।”
यस संसारमा धेरै असल कुराहरु छन् । यस संसारमा धेरै दयालु छन् । यस संसारमा धेरै उदारता छ । यो मानिसको वास्तविक स्वभाव हो, यो तपाईंको साँचो स्वभाव हो । तपाईंको स्वभाव हो– शान्तिलाई अगाध प्रेम गर्नु, शान्ति चाहनु, तृप्त हुनु । यो भनिरहनु पर्ने कुरा नै होइन । साँच्चै नै यस पृथ्वीमा एउटा स्वर्गलाई स्थापना गर्न सकिन्छ ।
मानिसहरुले कुरा गर्ने गर्छन्, मरेपछि के उनीहरु स्वर्ग जान्छन् ? त्यस सुन्दर स्वर्गको एउटा सानो समस्या छ । त्यस स्वर्गमा पुग्नका लागि तपाईंले मर्नुपर्छ । तपाईं जिउँदो हुँदैमा किन त्यो अनुभवद्वारा त्यो स्वर्गको स्थापना नगर्ने ? तपाईं जिउँदो हुँदै, तपाईं यहीँ हुँदै ?
मानिसहरुले भन्ने गर्छन्, “हेर्नुहोस् त कति मानिसहरु भोकै छन् ?” किन ? तपाईंले कहिल्यै मानिसहरु किन भोकै हुन्छन् भनेर विचार गर्नुभएको छ ? के यसको मूल कारण खानेकुराको अभाव हो ? होइन ! चालीस प्रतिशत उत्पादित खाद्यान्नलाई खेर फालिन्छ । यसलाई फ्याँकिन्छ । यो उपभोगको लागि उपयुक्त छैन भनेर फालिन्छ । यस संसारका हरेक व्यक्तिलाई खुवाउन चाहिनेभन्दा पनि बढी खानेकुरा छ ।
मानिसहरुले भन्ने गर्छन्, “मानिसहरुलाई चाहिने स्वच्छ पानी छैन ।” संसारमा प्रशस्त मात्रामा पानी छ । मलाई विश्वास गर्नुहोस्, प्रशस्त मात्रामा पानी छ । तर, पानीलाई कसले फोहोर बनाउँछ ? हामीले बनाउँछौँ ।
हाम्रो आफ्नो वास्तविक स्वभावलाई बुझ्ने, हाम्रो त्यो शक्तिलाई बुझ्ने कुरा हामीमा नै निर्भर छ । यदि हामी त्यो शान्तिलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने त्यो शान्तिलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ ।